Khupha iplagi kwaye uphumle kwaye utyibilike-imizuzu ukusuka kwi-Elk MNT Ski
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguCarissa
Relax, qhawula unxibelelwano kwaye ube namava endalo kunye nosapho okanye nabahlobo kwiyunithi yethu yokugqibela ehlaziyiweyo yedolophu ebekwe kudederhu oluhle lweeNtaba ezingapheliyo ezinombono wokuchukumisa.
Iindwendwe ezinomdla wokutyibiliza ekhephini ziyakuvuyela ukwazi ukuba i-Elk Shack ikwi-2.8 yeemayile ezifanelekileyo ukusuka kwindawo yokupaka i-Elk Mountain Ski.
Indawo yokuNqanda, Relax kwaye uQhagamshele kwakhona (kunye neSki!)
Khupha iplagi kwindlu yethu yothando ebizwa ngokuba yi "Elk Shack" yeyunithi yedolophu. Siye sayilungisa yonke le yunithi silungisa indawo yokuzola noxolo. Le ndlu yedolophu yenye yesandla kwi Endless Mountain Resorts imizuzu (2.8 miles) ukusuka Elk Mountain Ski Resort.
IPennsylvania likhaya lamaxesha amane amnandi, ngalinye linoluhlu lwazo lwemisebenzi. Sijoyine kwi-Elk Shack ukuze ufumane ixesha olithandayo lonyaka.
NgoBusika bungqonge ikona asinakuthelekelela ukubaleka ngcono.
Itshokholethi eshushu okanye intwana ezishushu ezikwindawo epholileyo yomlilo ivakala imnandi- kodwa ukuba ziimayile eziyi-2.8 ukusuka e-Elk Mnt Ski Resort kunye nemizuzu ukusuka kwi-D&H Rail-Trail kuvakala ngcono.
Ukutyibiliza ekhephini, ukutyibilika ekhephini, ukutyibilika ekhephini kunye nokuhamba ngekhephu kunye neentlobo ngeentlobo zezinto ezenziwa ngaphandle ziyafumaneka kwimizuzu kwiindwendwe zethu.
I-Rail-Trail Council ye-NEPA isingatha imisitho eyahlukeneyo eyonwabisayo yangaphandle ebusika kwaye inezihlangu zekhephu ezisimahla zokuboleka.
Ixesha endilithandayo kwi-D&H Rail-Trail bubusika. Andikwazi ukucinga ngendlela engcono yokuchitha iiyure ezimbalwa ngaphandle ngelo xesha libandayo lekhephu kunokuphonononga iRail-Trail entle. Ndingakukhuthaza ukuba ube nobuqili kwaye uqashe izihlangu zekhephu (ezisuka kwi-Rail-Trail) kwaye wonwabe kwikhephu elizolileyo eligqunywe emaphandleni okanye ipere yokutyibilika enqumla ilizwe ukuze unyuse izinga lentliziyo yakho kunye nokuzilolonga iimayile ze-D&H Rail-Trail.
Unezihlangu zekhephu? - ube nayo kwi-Elk Shack yeehektare ezingama-60, ndinokukhokelela kwiindlela zam endizithandayo. Ukuba wena kunye nabantwana bakho nithanda isileyidi- iinduli ze-Elk Shack aziyi kudanisa.
ke bhukisha namhlanje kwaye uqale into entsha yokuzonwabisa ... ukuhlala ngaphandle kunye nokudlala eWINTER e-PA
Inkcazo yaseNtwasahlobo nekwindla ye-Elk Shack yethu
Qalisa ukuhlala kwakho e-Elk Shack ukonwabela ikofu kwiveranda engasemva ngelixa usonwabile kwimibono eyandayo yelizwe elizolileyo. Gcwalisa iintsuku zakho ngothotho lwemisebenzi efana nokunyuka intaba okanye ibhayisekile i-Elk Mountain Ski Resort okanye kwi-D&H Rail-Trail entle, i-ATV kwiimayile zeendlela zasekhaya, igalufa kwiikhosi zasekhaya. Okanye ungahlala ekhaya kwaye ujabulele iihektare ezingama-60 kwindawo ekuchithelwa kuyo iiholide, udlale intenetya, i-pickle ibhola, ikhosi ye-putt putt, ibhola ye-bocci, i-horseshoe, isethi yokujingi okanye intlanzi echibini (zonke izixhobo ziyafumaneka kwiindwendwe) Qeda usuku nge-s' Mores kwenye yemigodi yomlilo kwipropathi kwaye ipholile ukuya kwindawo evuthayo yeenkuni kwiyunithi.
I-HDTV ene-I-Amazon Prime Video, I-Roku, I-Netflix, I-Hulu
Indawo yokuphumla yedolophu ebekwe kwiiNtaba ezingapheliyo imizuzu ukusuka kwi-Elk Mountain Ski resort
Umbuki zindwendwe ngu- Carissa
Ndifumaneka ngayo nayiphi na imibuzo okanye iinkxalabo ngexesha lokuhlala kwakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Union Dale